नेहा कक्करसङ्ग ब्रेक! अपको बारे पुर्व प्रेमी हिमांश कोहलिले ३ बर्ष पछि खोले रहस्य… – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /International/नेहा कक्करसङ्ग ब्रेक! अपको बारे पुर्व प्रेमी हिमांश कोहलिले ३ बर्ष पछि खोले रहस्य…
हिमांश कोहली र गायक नेहा कक्कड़ कुनै समयमा अचम्मको जोडी मानिन्थ्यो, तर दुबैको २०१८ मा ब्रेकअप भयो। उही समयमा नेहा (नेहा कक्कड़) ले गत वर्ष अक्टोबरमा गायक रोहनप्रीत सिंह (रोहनप्रीत सिंह) सँग विवाह गरे। यस्तो अवस्थामा, करीव ३ बर्ष पछि,…
हिमांश कोहली र गायक नेहा कक्कड़ कुनै समयमा अचम्मको जोडी मानिन्थ्यो, तर दुबैको २०१८ मा ब्रेकअप भयो। उही समयमा नेहा (नेहा कक्कड़) ले गत वर्ष अक्टोबरमा गायक रोहनप्रीत सिंह (रोहनप्रीत सिंह) सँग विवाह गरे। यस्तो अवस्थामा, करीव ३ बर्ष पछि, हिमांश कोहली नेहा कक्कड़सँग उनको ब्रेकअपमा खुलेर बोलेका छन्।
हिमांश कोहलीले भर्खरै एउटा अन्तर्वार्ता दिएका थिए र भनेका थिए कि ‘त्यो मेरो ब्रेकअप थियो। के मैले सम्पूर्ण विश्व लाई यसको बारे मा भन्नु पर्छ? मेरो घरमा के भएको मैले किन सबैलाई बताउनु पर्छ? अरुलाई किन फरक पर्दछ?’ हिमांशले भने, ‘यो सबै २०१८ देखि भइरहेको थियो। मैले यसका लागि नेहालाई पनि दो श दिन्न । उनी अगाडि बढिसकेकी छिन, खुसी छिन् र म उनको लागि खुसी छु।
आफ्नै लागि खुसी छु म मेरो सपनाको जीवन बिताइरहेको छु, पैसा कमाउँदैछु र धेरै मानिसहरुसङ्ग रमेको छु ।’
हिमांशाले थप भने, ‘त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जो २०१८ मा अड्किएका छन् जबकि हामी २०२१ मा छौं। तपाईं यसको बारेमा केहि गर्न सक्नुहुन्न। कसै-कसैलाई लाग्छ कि मैले कसैलाई केही ग;ल्ती गरेको छु, तर मलाई थाहा छ कि म ख,राब मान्छे होइन। ‘